HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ISNIIN 15-KA LUULYO 2019-KA
Monday July 15, 2019 - 09:23:40 in Wararka by Mogadishu Times
MADAXWEYNE LAFTAGAREEN OO KULAN LA QAATAY WAFDI KA SOCDA DFS & QM Wafdigan oo isugu jira Wakiilka Q/Mid oobay Uqaaabilsan Arrimaha Dacadiyada ha Ka dhanka Haweenka Goobaha Dag alada Ka soc oda iyo wasiiradd
MADAXWEYNE LAFTAGAREEN OO KULAN LA QAATAY WAFDI KA SOCDA DFS & QM Wafdigan oo isugu jira Wakiilka Q/Mid oobay Uqaaabilsan Arrimaha Dacadiyada ha Ka dhanka Haweenka Goobaha Dag alada Ka soc oda iyo wasiiradda Haween ka Xuquuqul insaanka DFS ayaa Shalay waxaa ay gaar een M/Baydhabo.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka Diyara daha Baydhabo ku soo dhaweyay Lataliya ha Madaxweynaha KGS ee Arrimaha Haw eenka iyo Wasiirka gagaarka Maareynta Masiibooyinka DGKGSIntaasi ka dib ay aa waxaa ay kulan la qaateen Madaxwey naha Dowlad GKGSoomaaliya Md.C/Casii is Xasan Maxamed Laftagareen,Waxana Kullanka qeyb ka ahaa wasiiradda WQ , Gargaarka MiyoMasiibooyinka, Cadaalad da Iyo Garsoorka , Haweenka iyo Xuquuq ul insaanka DGKGS iyo Mas’uuliyiin kale.
kulanka Ka dib ayaa si wada jir ah ula hadleen Warbaahinta, Waxaana ugu hore en Halkaasi ka hadley Wakiilka QM U qa abilsan Arrimaha Dacadiyadaha ka dhan ka Haweenka Goobaha dagaalada Ka soc oda pramilla patten iyo Wasiiradda Hawe enka Xuquuqul Insaanka DFS Marwo: De eqa Yaasiin, Waxana ay sheegeen Ujeed ka ay gaareen M/Baydhabo, in ay tahay si dii KGS u gala shaqeyn lahaayeen horum arminta Arrimaha Haweenka.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka KGS Md.Laftagareen, ayaa waxaa uu she egey in Kulanka ay la qaateen wafdiga Ka socoda Q/Madoobey iyo DFS,ay kawada hadleen sidii udub dhaxaad ugu noqon lahayeen Haweenka Maamulada.
Wasaaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta XFS ayaa kulan la qa adatay mas'uuliyiin ka socd ay shirkadaha u adeega Xuj eyda Somaaliyeed ee sana dkaan ku guuleystay inay xujeyda qaadaan.
Kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay sidii si wanaagsan loogu ade egi lahaa Xujeyda Somaaliyeed,waxaana kulanka goobjoog ka ahaa Wasiiradaha Wasaaradaha Awqafta iyo Arrimaha Diinta ee Dowlad Goboleedyada.
Wasiir kuxigeenka WA iyo Arrimaha Diinta Cismaan Aadan Dhuubow ayaa she egay in sanadkan 58 shirkadood ay u tarta meen daabulida xujeyda Soomaaliyeed, balse ay ku guuleysteen 11 shirkadood oo Wasaaradu la shqeyn doonto.
Waxaa uu sheegay in XF Soomaaliya ay sanadkan ku sameysay wax ka beddel waxyaabihii ay ka caban jireen dadka Soomaaliyeed ee xujeyda ah,isla markaa na uu rajeynayo in lagu guuleysan doono.
Wasaaradda ayaa diyaar garowgii ugu dambeyey ugu jirta u adeegidda 11500 oo Xaaji sanadkan,waxayna ballan qaaday in ay kormeeri doonta lana xisaabtami doon ta Shirkadaha u adeega Xujeyda Soomaliy eed ayuu yiri Wasiir kuxigeenka Wasaaar adda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta.
Marekanka ayaa iskudayaya inuu ku ci qaabo dowladda Turkiga go’aanka ay ku iibsatay gantaallada nidaamka difaaca ee S 400 oo dalka Ruushka lagu farsameeyo, sida uu ku warramay wargeyska Bloomb erg ee ka soo baxa Maraykanka.
Warbixinta wargeyska ayaa lagu shee gay toddobaada ina soo aaddan inuu Mar ekanka qorsheynayo cunaqabateyn uu sa aro Turkiga,iyada oo kooxda madaxweyne Donald Trump horey u garwaaqsadeen xir mooyin cunaqabatayn oo ka dhan ah Turki ga.Hoggaanka guddi yadda Aqalka Senate ka ee Marekanka u qaabilsan arrimaha ci idanka iyo xiriirka dib adda ayaa war qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen waxay ugu baaqeen Mad axweyne Trump inuu cunqabatayn ku soo rogo Turkiga.
Wasaaradda difaaca Turkiga ayaa 7aa dkii hore xaqiijisay in qeybtii ugu horreysay ee gantaallada nidaamka difaaca ee S 400 ay soo gaareen ciidda Turkiga , waxa ana qeybtaa la geeyay saldhig ku dhow caasimadda Ankara.
WAAN WAAN LAGA DHEX BILAABAY SOOMA ALILAND & JABHADA KORNEEL CAARRE
Wararka laga helayo Gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in Guddi ka baxay M/Ceerigaabo uu waan waan ka dhex wado Maamulka Soo maaliland iyo Jabhadda Kor neel Caaro oo horay uga mid ahaa Ciidamada Soom aaliland.
Ciidamo uu wato korneel Caare ayaa dhawaan degay Buuraha Kul miyo oo ku yaalla duleedka Magaalada Ce erigaabo, kadib dagaal ka dhacay halka asi,waxaana la sheegay in waan waanta ay wadaan guddi u badan dad ku heyb ah Korneel Caare.
Odayaal & Waxgarad ka mid ah dadka Magalada Ceerigaabo ayaa Guddigaasi ka mid ah sida uu Warbaahinta u sheegay mid ka mid ah waxgaradka Magaalada Ce ergaabo ee Gobolka Sanaag.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku dar ayaan in Guddiga dhex dhexaadinta iyo korneel Caare uu kulan uga socdo Buuraha Kulmiye,isla markaana la filayo in xubno ka socda Soomaaliland ay wada hadalladaas ku biiraan.
Warar hordhac ah oo soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in guddiga ay Kor neel Caare ka dalbadeen in mudo Afar Ci sho gudahood ah uu hubka ku dhigo si uusan ugadhicin Gobolka Sanaag dagaal dambo oo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ciidamada Korneel Caare .
Ciidamada uu hogagamiyo Korneel Ca are iyo kuwa ka tirsan Soomaaliland ayaa dhowr jeer ku dagaalamay deegaano ka tir san gobolka Sanaag,waxaana Korneelka uu dhowr jeer ku hanjabay in uu weerari doono Magalada hargeysa.
WADDOOYINKA GALA M/DHUUSAMAREEB OO LA XIRAY
Ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna ee ku biiray Maamulka Galmudug ayaa gebi ahaanba Shalay xiray wa do oyin ka soo ga la iyo ku wa ka baxa M/ Dhuus amar eeb, ka dib markii manta uu qarax ka dhacay.
Ciidaamada ayaa la dhig ay wadooyin ka,waxaana gebi ahaanba xilli gaan ay joojiyeen soo gelida Magaalada, iyaga oo xaafadaha qaar ee Magaalada dhuusamareeb howlgallo ka wada.
Wariyeyaasha M/Dhuusamareeb ayaa waxaa ay soo sheegayaan in Ciidamo wa ta Gaadiidka dagaalka lagu arkayo Xaafa daha iyo waddooyinka soo gala M/ Dhuu samareeb oo shalay ka duwan sidii hore.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ay aa ku sugan M/Dhuusamareeb, iyaga oo halkaasi ka wada howlo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa Galmudug mideysan.
Magalada dhuusamareeb ayaa Shalay waxaa ka dhacay qarax la sheegay in uu ahaa mid lagu duugay goob maqaaxi ah oo ku taalla kasoo horjeedka Xarunta Inji, waxaana qaraxaasi ku dhintay askari ka tir sanaa Ciidamada Ahlusuna walow markii hoe la sheegay in uu ahaa ruux isasoo mi idaamiyay balse markii dambe uu beeno obay warkaas.
DAD KU DHINTAY DAADAD KU ROGMADAY DE EG ANO KA TIRSAN DALKA NEPAL
Ugu yaraan 50 Qof ayaa ku dhimatay, tiro intaa ka bandanna waa lagu la’yahay daadad iyo Dhul go’ka dhacay Dal ka Nepal, markii ay halkaasi ka da’een Roobab lixaad leh Saacadihii lasoo dhaafay.
Daadadkan ayaa sidoo kale saameey ay degaanno ku yaalla Waqooyi bari Dal ka Hindiya, halkaas oo ay sidoo kale ku dhinteen 11 Qof markii uu Karkaarrada jab saday Webi Gobolkaasi ku yaalla.
Saraakiisha Boliiska Dalka Nepal ay aa sheegay in 33 Qof haatan la waayay raq iyo ruux, Tuulooyin dhowr ahna ay Bi yaha qaateen, iyadoo ay Dad gaaraya 1,100 kalena ay kasoo badbaadiyeen goo baha ay mashaqadu ka dhacday.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam( Ma doobe) ayaa Shalay oo Axad ah shir gud doomiyay kulanka golaha amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland oo lagu qabtay Magalada Kismaayo.
Xaalada guud ee am niga Dowlad Gobole ed ka Jubbaland ay aa ugu horayn kulan ka lagaga hadlay iya doo la sheegay in xa alada amnigu hadda ay wanaagsan tahay, in kastoo dhawaan weeraro iyo qaarxyo ay ka dhaceen.
Golahu wuxuu u mahadceliyay dhama an dadkii usoo tacsiyeeyay Dowlad Gobo leedka Jubbaland ee xanuunka la qabsa day waxaa kale oo laga hadlay qaabkii loo maarayn lahaa khasaaraha ka dhashay weerarka haday noqoto burbur hantiyeed iyo dadka dhaawacmay intaba.
Madaxweynaha ayaa magacaabay gu diga taakulaynta dadka wax ku noqday we erarkaas, kuwaas oo ka shaqayn doona si doo loo caawin lahaa dadka dhibaatadu ay gaartay iyo sidii gacan loogu fidin lahaa milkiilaha hotelka madiina oo ah shaqsi na afo ah oo dhaqaalahiisa u huray dalkiisa.
Qorshaha amniga doorashada ayaa la is ku raacay in Dowlad Goboleedka Jubbal and ay si adag u sugayso amaanka door ashooyinka iyadoo dhamaan Ciidamada amaanka la galiyay heegan buuxa.
Golaha amniga Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo jeediyay in wacyi gal in la siiyo Bulshada la xiriirta sidii ay ciid ammada amaanka ugu gacan siin lahaye en sugida amaanka deegaanada Jubbal and gaar ahaan Magalada Kismaayo.
RA’IISUL WASAARE KUXIGEENKA SOOMAA LIYA OO GUDDOOMIYAY SHIRKA TUBTA HORUMARINTA ARRIMAHA BULSHADA
R/Wasaare kuxigeenka XFS Md.Ma hdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shalay guddoomiyay shir ay yeesheen gu ddi hoosaadka golaha wasiirrada ee tubta horumarinta arrimaha bulshada.
Shirka shalay oo ay ka qeyb galeen wasaarahaha halbeegyada ku leh tubta ho rumarinta arrimaha bulshada ayaa looga hadlay horumarinta arrimaha bulshada iyo dardar gelinta fulinta qorshayaasha wasaa radaha u degsanaa in ay ku dhammayst iraan sannadkaan 2019.
Wasaaaradda Gargaarka iyo maareynta musiibooyinka XFS ayaa shirka kusoo ba ndhigtay warbixin la xariirta heerka ay mar eyso xaaladda bini’aadninimo ee ka jirta guud ahaan dalka. Wasaaradaha qaybta ka ah tubta horumarinta arrimaha bulsha da ayaa lagu wargeliyay in la billaabayo isla xisaabtanka lagu daba gelayo wixii wasaaradaha uga qabsoomay halbeegya da sannadkaan u qorsheesnaa ee ay bal lan qaadeen fulintooda.
R/Wkuxigeenka dalka ayaa dhamma an wasaaradaha ku jira tubta faray inay da rdar geliyaan fulinta qorshayaasha u degs anaa in ay sannadkaan ku qabtaan ee ay la saxiixdeen Ra’iisul Wasaaraha billaaw gii sannadkaan 2019.
DAGAAL KA DHACAY XAAFAD KA TIRSAN MAG ALADA MUQDISHO
Dagaalkaan oo u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya iyo maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafada Suuq Boocle ee degm ada Dharkenleey. Dagaalka ayaa goobjo ogayaal waxaa ay sheegeen inuu yimid, ka dib markii maleeshiyaad hubeysan ay joojiyaan guri dhismo uu ku socday oo lac ag ay ka doonayeen,hayeeshee dadka Guriga loo dhisayay ay ku wargeliyeenCii damada Booliska ee Saldhiga degmada Dharkeenleey.
Xiisada ka dhalatay Guriga la dhisaayo ayaa daraad soo bilaabatay,waxana Maan ta Guriga tegay kooxdii lacagta ka dooney say, iyada oo ay wada dagaalameen Ciida mo ka yimid Saldhiga Boolisa Dharkeen leey Waxaa jira khasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaalkaas,hayeeshee weli aan la cadeyn Karin inta uu la eg yahay, waxaana Xaafada Suuq Boocle laga maqlayaa rasaas goos goos ah oo ay isku ridayaan Ciidamada wada dagaalamaya.
Si kastaba dhacdooyinka la xiriira isku qabsiga Guryaha la dhisayo si lacag looga qaado ayaa tira ka dhowr jeer ah ay kusoo bateen M/Muqdisho,waxaana tali ska Ciid anka Booliska iyo xooga ay kasoo saare en digniin adag.
ASKARI KA TIRSANAA CIIDAMADA DOWLADDA OO MUQDISHO LAGU DILAY
Dilka Askarigaan ayaa waxaa uu ka dhacay Isgoyska Danwadaagahaha ee degmada Wadajir Gobolkan Banaadir, wa xana la sheegay in uu dilka ka dambeeyay askari kale oo ka tirsan Ciidamada Dow ladda.
Dilka askariga ayaa yimid, kadib markii askariga oo watay Gaari uu isku dayay in uu si xoog ah ku markii koontorool Ciida mada,hayeeshee askari kale oo goobta ku sugnaa ay wada mureen sidaasina askari ga lagu dilay.
Askariga dilka geystay ayaa Wararka la helayo ay sheegayaan inuu goobta ka bax saday,isla markaana meydka askriga la dil ay ay goobta ka qaadeen Ciidamo ka tir san kuwa Booliska Soomaaliya.
Isgoyska DanWadaagta ee degmada Wadajir ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa yaallay koontorool Gawaarida lagu celinay ay oo ahaa (KALA WAREEG) isla markaa na gaadiidka ay halkaasi kasoo kala war eegayaan.
Dilka askariga ka tirsanaa Ciidamada Dowladda ligu geystay degmada Wadajir ayaa kusoo aadaya xilli Shalay Xaafada Suuq Boocle ee degmada Dharkeenleey ay ku dagaalameen Ciidamo Boolis ah iyo maleeshiyaad doonayay inay lacag ka
MADAXWEYNE WAARE OO KA JAWAABAY SA BABTA IS BADALKA JOOGTADA AH LOOGU SAM EEYO MAAMULKA GOBOLKA HIIRAAN
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa markii ugu horeysay goob fagaaro ah ku soo hadal qaaday su'aal in badan ay isweydiinay een bulshada ku dhaqan G/Hiiraan taasoo ah sab abta keenta isbadalka jo ogtada ah ee lagu samee yo maamulka gobolka Hii raan? Wuxuu sheegay in marar badan uu maqlay su'aashan, madaama gobolka Sh Dhexe wali uu joogo guddoomiyihii la mag acaabay markii la dhisay dowlad gobollee dka Hirshabeelle.
'''Isbadalka mar walba lagu sameeyo ma amulka gobolka Hiiraan wuxuu tusaale u yahay ama calaamad u yahay cudur ku ji ra jirka Hiiraan, waxaan rabaa in aan idin ballanqaado Annaga oo kaashaneyna wa xgaradka gobolka in la qaban doono shirweyne looga arinsanayo Masiirka iyo Aa yaha gobolka'' ayuu yiri Md Waare.
Jawaabta madaxweyne Waare uu bixiy ay ayaa u muuqatay mid ka weecineysa dowladda Hirshabeelle eedda iyo magac aabista is daba jooga ah ee guddoonka maamulka gobolka Hiiraan,, isaga oo taa badalkeeda sheegay in bulshada ku dhaq
Ka yimid bogga3aad
an gobolka looga baahan yahay inay iya gu gartaan halka dhibaatadu ka jirto
''Qof kasta oo xil ka soo qabtay gobolk an markii la magacaabayay waxaa uu ah aa qof wanaagsan oo bulshada dhaxdee da ixtiraam ku leh, laakiin marka xilka loo dhiibo sidaa ma sii ahaanayo, waa inaan ogaanaa ciladaas halka ay jiro,' ayuu yiri madaxweynaha dowlad gobolleedka Hir shabeelle.
Cali Jeyte Cismaan oo horay guddoomi ye uga soo noqday gobolka oo khudbad ka jeedinayay munaasabadii xil wareejinta ee maalintii daraad ka dhacday xarunta maamulka gobolka oo soo hadal qaaday isbadbadalka joogtada ah ee lagu same eyo guddoonka gobolka Hiiraan ayaa yiri'' Waxaan is leeyahay sababta uu madaxw eynuhu isbadalkan mar walba u sameyn ayo. waxaa uu raadinayaa kii ugu mudnaa ee hoggaamin lahaa gobolka, sidaa daraa deed waxaa rajeynayaa in Cali Maxamed Caraale uu noqon doono qofkii isaga ah ee la doondoonayay''
Cali Maxamed Caraale ayaa noqonaya guddoomiyihii 6aad ee G/Hiiraan uu mud adii ay jirtay Hirshabeelle, waxaana dad badani ay aaminsan yihiin in sababta ugu weyn tahay dhaqaalaha ka soo xarooda gobolka oo ay isku qabtaan habka loo ma amulayo guddoomiyaha markaa xilka ha ya iyo madaxda ugu sareysa dowlad gobo lleedka, taasoo keenta in deg deg xilka loo ga qaado guddoomiyaha.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Sooma aliya, Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan iyo kuxigeenkiisa 1waad ayaa shalay kullan xog wareysi ah la yeeshay WasiirkaW/Qorsheynta,Maalgashiga iyo horumarinta ganac siga Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan iyo mas’ uuliyiin kale.
Wasiirka Qorsheynta, Jamaal Maxam ed ayaa guddoonka golaha Shacabka u soo bandhigay Qorshaha wasaaradda qor sheynta, iyadoo la tashi kala sameyneysa dhammaan hay’adaha Dowladda iyo qeyb aha kala duwan ee Bulshada.
"Wasaaraddu waxay diyaarinaysa shur uuc badan oo la xiriira qorsheynta iyo maa lgashiga, qaarkoodna ay gaba gabo mara yaan oo uu ka mid yahay sharciga NGOyada si golaha Shacabka loo horgeeyo." ayuu yiri wasiir Jamaal oo ka warramayay kullanka. Guddoomiye Mursal ayaa W/Qor sheynta madaxdeeda uga mahad celiyay la tashi ga ay la sameyneyso hay’addaha dowlada , wuxuuna sheegay in goluhu uu diyaar u yahay dedejinta shuruuc walba oo dalka muhiim u ah.
MIDOWGA YURUB OO LOOGU BAAQAY IN AY BADBAADIYAAN MUHAAJIRIINTA LIIBIYA KU XAYIRAN
Wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalka Midowga Yurub ayaa loogu baaqay inay degdeg u caawiyaan ku mannaan dad muhaajir iin ah oo ku xayiran xer yo ku yaalla dalka liib iya. Wasiirradda ayaa kulan ku yeelanaya magalaalada Brussels ee dalka Belgium barri oo Isniin ah.
kulankaas oo looga doodi doono arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo muhaaj iriin badan oo ku jira xeryo ku yalla Liibiya.
Xaaladda dadkan magangaliyo doonka ah ayaa meel sare gaartay markii dhawa an xerada Tajoura oo ah goob lagu hayo dadka muhaajiriinta ah lagu laayey daraa siin dad ah oo ay ku jireen carruur iyo haween. Hay’adda QM u qaabilsan Xuqu uqulinsaanka ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay tahay in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan dadka lagu hayo xeryaha ku yaalla dalka Liibiya.
War ay soo saareen hay’adaha Amnesty international iyo Human Rights Watch ay aa loogu baaqay wasiirada arrimaha diba dda M/Yurub iyaga oo wakiilo ka ah dalal kooda in ay qaxootiga ku sugan liibiya ay u qaadaan meel ammaan ah oo ka bax san dalka Liibiya, iyaga oo si gaar ah u dal baday in dadkaa Yurub loo raro.
Matteo de Bellis,oo ah Cilmibaare ka tirsan Amnesty International, ayaa sheeg ay in weerarkii argagaxa la haa ee ka dha cay Tajoura, horraantii bishan uu muujiyey khatarta ay ku sugan yihiin dadka Liibiya ku xiran ee aan meelna aadi Karin.
Tan iyo bilowgii Abril ee sanadkan , UNHCR waxa ay ku guuleysatay in ay u qaaddo 289 ruux dalka Niger la geeyey halka dalka Talyaanigana laga dejiyey dad gaaraya 295 ruux.
Talyaaniga ayaa ah dalka kaliye ee ka tirsan Midowga Yurub ee ogolaaday in uu aqbalo dadka magangaliyo doonka ah ee Liibya ku sugan. Waxaa jira eedeymo dho wr jeer loo jeediyey wadamada Yurub oo ku saabsan in ay gacan bidixeynayan wax u qabashda dadka Liibya ku xayiran.
Sida lagasoo xigtay Hay’adda Socda alka Adduunka lixdii bishan, ciidamada ila alada xeebaha Liibya ayaa dhexda u galay dibna ugu soo celiyey dalkaas dad gaaraya 3,750 oo ruux tan iyo bilowgii sanadkan.
Isla wakhti kaas la mid ah, dad gaaraya 5,000 oo qof ayaa gaaray dalalka Talyaani ga iyo Malta, halka 426 ay ku dhinteen biyaha Meditereeniyaanka iyaga oo doon aya in Yurub ay u tillaabaan.Shirka dalalka M/Yurub ayaa dhacaya xilli gurmad xoogg an ay ka wadaan dalka liibiya hay’addaha Gargaarka qaabilsan.
WAR KU SAABSAN QARAXYDII DHUUSA MAR EEB & ALSHABAAB OO SHEEGTAY
Barqanimadii Shalay ayaa qarax Miino uu ka dhacay Maqaaxi Shaaha laga cabo oo ku taalla kasoo horjeedka Xarunta Inji oo ay ku Shaqeeyaan Hay’adaha kala du wan ee Maamulka Galmudug sidoo kal ena Xafiis u ah Mada xa Xukuumada Maa mulka Galmudug.
Qaraxa ayaa dad goo bjoogayaal ah wa xaa ay sheegeen in uu ahaa miino maqa ayada lagu aasay,waxana ku geeriyooday askari ka tirsanaa Ciidamada Booliska M/ Dhuusamareb halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo ay ku jirto haweeneeyda leh Ma qaaxida qaraxa uu ka dhacay.
Markii uu qaraxa dhacay ayaa inta badan waxaa Warbaahinta qaarkood lagu qoray ay in uu ahaa qarax ismiidaamin ah, haye esheee saacado kadib la ogaaday in uu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah,isla markaana askariga ku geeriyooday aad loooga yaqaano Magalada Dhuusamareeb kana tirsanaa Ciidamada Booliska kaas oo Magaciisa lagu sheegay
Dhinaca kale Ciidamada Ammaanka M/Dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheeg een inay fashiliyeen qarax Miino oo lagu dhex qariyay Gasax Caanaboro ah,kaas oo la dhigay meel u dhow Saldhiga Boolis ka degmada Dhuusamareeb.
AlShabaab ayaa sheegtay Mas’uuliya da qaraxyadaas,waxana ay sheegeen in ay ku dileen askar ka tirsaneyn Maamulkii ahlusunna ee ku biiray Galmudug.
TALIYAHA BOOLISKA GALMUDUG IYO SARAA KIIL KALE OO KA BAXAY DHUUSAMAREEB
Ururka Ahlu Sunna ee wali gacanta ku haya Awoodda degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ay aa amar ku bixiyay in M/Dhuus amareeb uu ka baxo taliyaha booliiska Galmudug iyo Saraaki il ka tirsan Cii danka xoogga dal ka Sooma aliyeed.
Sida ay Risaala u xaqiijiyeen Saraakiil ka ti rsan Ciidanka Booliska Galmudug Taliya ha Booliska Cabdicasiis Yuusuf Dhagaba dan ayaa gaaray M/ Cadaado ka dib mar kii lagu amray in uu Magaalada ka baxo.
Taliyaha ayaa horay ugu sugnaa Magaala da Cadaado bilihii ugu dambeeyay, waxa ana la sheegay in uu shaqaddiisa u soo wareejiyay M/Dhuusamareeb markii ay Mi dowbeen Ahlusunna iyo Galmudug.
Ilaha muhiimka ah ee ka tirsan Booliska ayaa sheegay in M/Dhuusamareeb Mas’u uli yiinta Ahlusunna ay ku amreen in uu ka baxo taliyihii hore ciidanka xooga dalka qeybta 21aad Korneyl Sulub. Ahlusunna ayaa sidoo kale la sheegay in M/Dhuusa mareeb ay ka hor istaageen Sar aakiil Ciid an oo ka yimid M/Cadaado 7aadkii hore.
Hoggaamiyaha koox Maleyshiyo ah oo ka howl gasha dalka Burundi, taasoo lagu eedeeyay falal qalalaase iyo arxan darro ah, ayaa loo magacaabay inuu noqdo madaxa Telefishinka Qaranka dalkaas ee RTNB, waxayna arrintaas kicisay caro weyn iyo cambaareyn ka imaaneysa kooxaha u ol'oleeya xuquuqda aadanaha.
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa sheegtay in magacaabista Eric Nshimirimana ay tahay "mid niyad jab ku ah dhammaan dhibbaneyaashii ay waxyeellada u geysatay kooxda Imbonerakure".
Waxay sidoo kale hay'addu sheegtay in tallaabadaas "ay xadgudub ku tahay xorriyadda saxaafadda ee dalka Burundi".
Hase ahaatee, dowladda Burundi ayaa gaashaanka ku dhufatay dhammaan eedeymaha la xiriira tacaddiyada bani'aadannimada ee loo jeediyay kooxdaas.
Imbonerakure, oo ah garabka dhalinyarada ee xisbiga talada haya ee CNDDFDD, ayaa marar badan lagu dhaliilay inay geysteen qalalaase, xilligii uu madaxweyne Pierre Nkurunziza sida muranka dhalisay ku raadinayay inuu markii saddexaad xilka madaxweynaha ugu tartamo, sannadkii 2015kii.
Lewis Mudge, oo ah agaasimaha hay'adda Human Rights Watch ee bartamaha Africa ayaa BBCda u sheegay "in tacaddiyadaas ay ka mid yihiin dilal, xarig, handadaad iyo jirdil, ilaa iyo haddana ay sii socdaan"
"Nshimirimana waxay ahayd in lagula xisaabtamo waxa dhacay ee uu raalliga ka ahaa, intii lagu abaalmarin lahaa inuu hoggaamiyo warbaahinta kaliya ee kusoo hartay dalkaas", ayuu yidhi Mr Mudge.
Qaramada Midoobay ayaa horay Imbonerakure ugu aqoonsatay inay tahay koox maleyshiyo ah, inkastoo magacaas ay aflagaaddo ku tilmaameen mas'uuliyiinta kooxda.
Iyadoo isbaddal cusub oo dastuurka lagu sameeyay sannadkii 2018kii uu madaxweynaha u oggolaanayo inuu mar kale isasoo sharraxo, ayuu haddana Mr Nkurunziza sheegay inuusan usoo istaagi doonin xilka.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalkaas lagu soo qab qabtay dad farabadan,hayeeshee sigaar ah ay baaritaano ugu socdaan lab Ruux oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin Ururka AlShabaab.
Magalada Dhuusamareeb shalay Barqadii waxaa ka dhacay laba qarax oo mid ka mid ah uu geystay dhimashada hal askari oo ka tirsan Ciidamada Booliska iyo dhaawaca Saddex kale halka midka kale ay Ciidamada qarxiyeen, kaas oo lagu qariyey qasac lagu keeno CaanaBooraha,sida ay sheegeen Hay’adaha Amniga Magalada Dhuusamareeb.
HOWLGAL MUSAAFURIS AH OO KA BILAAWDAY MAREYKANKA
Olole lagu baadi goobayo dadka magangalyo doonka ah ee sharci darrada ku jooga gudaha dalka maraykanka ayaa laga bilaabay gobolada dalkaasi oo dhan Axaddii shalay.
In ka badan 2,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololahan lagu beegsanayaa kuwaasi oo la filayo in la masaafuriyo.
Ku simaha madaxa hey’adda socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ee maraykanka Matt Albence ayaa sheegay in ay beegsanayaan shaqsiyaad gaar ah oo maxkamadaha ku lahaa balamo la xiriira codsigooda magan galyo doon, kuwaasi oo qaadiyadda maxkamadaha ee arimaha soo galootigu ay diideen kiiskooda.
Matt Albence, ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku meesha ay ka bilaabeen dadkaa la soo qab qabanayo iyo sidoo kale tirada dadka ay soo qabteen ilaa hadda.
Waxa kor u sii kacday cabsida ay qabaan dadka soo galootiga ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, kuwaasi oo ay askartu xoog ku galeyso albaabadooda xaafadaha ay ku noolyihiin